OMN: Gabaasaa Addaa (ADOL,24,2018)“Yakkamtoonni aadde Biraaneerratti ajjeechaa suukanneessaa raawwatan sadii Humna Poolisii Addaa Oromiyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOMN: Gabaasaa Addaa (ADOL,24,2018)“Yakkamtoonni aadde Biraaneerratti ajjeechaa suukanneessaa raawwatan sadii Humna Poolisii Addaa Oromiyaa
OMN:Gabaasaa Addaa (ADOL,24,2018)“Yakkamtoonni aadde Biraaneerratti ajjeechaa suukanneessaa raawwatan sadii Humna Poolisii Addaa Oromiyaa to’atamuu odeessi na qaqqabee jira
“Yakkamtoonni aadde Biraaneerratti ajjeechaa suukanneessaa raawwatan sadii Humna Poolisii Addaa Oromiyaa keessaa to’atamuu odeessi na qaqqabee jira. Eenyummaa Poolisoota to’atamanii sana adda baasuun yaala.” Lammii Beenyaa
Tole OPDOn gochuu ishee mirkanessunu waan tokko. Maalif akka ummata keenya fixanis nuuf haa himan achumaan. Humni sadan shakkaman qaama Motumma erga ta’anii mootumaan maalif saba keenya akka fixu nuuf haa himu.
Ethiopia:-A pregnant woman was shot and killed in Dambi Dollo-South West Oromia. – https://t.co/TFWHho8Wt5 pic.twitter.com/XasPU7SWXL
— Kichuu (@kichuu24) July 24, 2018
“Qaaraan abbuma dhaabe gubdii!” Jedha Oromoon!
Oromoon ajjeefamuun akka itti fufu kan taasifame gaafa qabsoon Oromoo kallattii irraa bahe sanadha. Qabsoon Oromoo Kallattii irraa Kan baahees gaafa OPDOn abbaa qabsoo akka taatu hayyama isheef laanne sanadha! Kunimmoo dogoggora seenaa guddaadha. Dogoggora kanaaf oromoon har’a nama biraa kan quba itti qabu hinqabu.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa fii OPDOn Lubbuu Ilmaan Oromoo baraaruuf gonkuma fedhii hinqaban. Silaa dhugumaan Lammiif quuqamanii lubbuun lammiilee keenyaa guyya guyyaatti hin badu ture. Fakkeessee Qabsoo Oromoo kan fudhateef fedhii fii faayidaa ofii eeggachuu qofaaf akka tahe amma hojiin agarsiisaa jiru. Gantuun wayyaaneen bixxilame QBOtti abbaa tahee qabsoo akka fudhatu hayyamuun keenya har’a kufaatii guddaa nutti fide.
Ajjeechaa Liyyuu poolisii Abdii illee nurraan gahaa jiru otoo hadheeffannu Korri bittinneessaan naannoo keenyaas nu ajjeesutti fuulleffate. Namni Lammiif dhaabate jedhamu akkamitti dubartii ciniinsuutti jirtu rasaasaan ajjeesa?
OPDOn waggaa tokkoof cinaa dura akkuma humna kora bittinneessaa nurratti bobbaastee ilmaan oromoo ajjeesaa turte, har’aas qabsoo ummataa fudhatee aangoo argannaan afaan qawweetiin oromoo jilbeenfachiisuuf kora bittinneessaa itti bobbaastee ilmaan oromoo bifa harawaan ajjeesuu jalqabe.
OPDOn yoomiyyuu Oromoo ganuu malee Oromoof tola oolee hinbeeku, Lubbuu ilmaan sabaa ajjeesuu malee baraaree hin beeku, ofii quufee buluu malee ilmaan sabaa beela baasee hinbeeku.
OPDOn yoomuu taanaan ulee abaarsaati! Kaayyoon OPDO Lammiilee Ajjeesuu fii Ajjeesisuu Malee Lubbuu Lammiilee Baraaruu miti! Ummanni keenya garuu har’allee kana hubachuu hin dandeenye. OPDOn Qabsoo ummata oromootiin garbummaa wayyaanee jalaa baatee har’a angoo dunfannaan akkuma amala isheetti saba ishee gante.
Qaaraan abbuma dhaabe gubdi!” akkuma jedhamu sana, OPDOn kanaaf dubartii ciniinsuurra jirtu ajjeesuudhan galata Oromoof galchite!
~ Abbaa Daraar
Mootiin UAE, Sheek Mohaammadbiin Zaayid, Itoophiyaa fi Eertiraan nagahaa fi araara buusuu isaanii sababeeffachuudhan hoggantoota biyyoota lamaanitii badhaasa medaaliyaa kennan